Izifo zezitshalo zingaholela ekulahlekelweni kokubukeka okuhle okuhlobisa, kodwa ngokujwayelekile ekufeni kwembali oyintandokazi. Ngakho-ke, kuyadingeka lapho kuqala izibonakaliso zesifo, ngaphandle kokulibaziseka, ukusebenzisa usizo lwemithi efanele. Kodwa-ke, uma isitshalo sesiphelele igciwane, isibonelo, i-mosaic, ngakho-ke ayikho into engayisiza, futhi imbali kufanele ilahlwe phansi nenhlabathi kanye nebhodlela ukuze ingafaki imifino eluhlaza.
Futhi nakuba izindlu zendlu, ngokungafani nezitshalo zasemgwaqweni, zivame ukuthinteka kakhulu yizigciwane, kodwa lokhu kusenzeka.
Ukwengeza kumagciwane, kunezifo ezifisa izifo zezitshalo. Isizathu sesifo singaba amagciwane.
I-fungus nama-bacteria, ngokungafani negciwane, elishiya amaqabunga umdwebo wama-mosaic, kubangele ukugula okufakiwe. Ngokusakazeka kwezifo ezinjalo, akusi njalo njalo ukulwa ngempumelelo. Kakhulu kunzima ukukwenza ezimweni ezingenakulungiswa zokulondoloza, njengomoya omile ekamelweni, amanzi enhlabathini ngenani elincane elangeni. Izifo zezitshalo kuleli cala zenzeka ngaphambili, ngenxa yokuthi izakhamuzi zamabhodwe ziyancipha ukuzivikela futhi zizwe "ubuthakathaka" kokubili kwesiqu kanye namaqabunga. Ukuphendula okufanayo kubangelwa inhlabathi engakhethi kahle, ibhodlela lembali elingavumelani nobukhulu, indawo ebanda noma engalungile.
Isibonakaliso sokubukeka kwesifungulu sinezinhlanzi ezincane, ezibomvu noma ezibomvu, ezikhulayo - futhi iqhwa liyafa. Iningi le-fungus lijwayele ama-orchid, abanturium, ezinye izintambo kanye ne-camellia. Ngakho-ke, kunconywa ukuhlola izitshalo njalo, ikakhulukazi ebusika, lapho besengozini kakhulu. Ukutholakala ngezifo zezitshalo ngesikhathi esifanele kungasuswa, kanti isimo sawo esinganaki siholela ekulahlekelweni kwembali.
Isinyathelo sokuqala ukuyeka ukuphuza isitshalo nokususa izingxenye ezithintekayo.
Okuyingozi kunazo zonke ukubola, okushisa okuphansi kanye namanzi aqinile angathinta zonke izinhlobo zezindlu, ikakhulukazi i-senpolia noma i-begonias, okuvela kumswakama okweqile kuqala inqubo yokubola kwamaqabunga. Futhi isizathu salokhu kungase kuthole uketshezi emaceleni ase-pubescent.
Ngokuvamile umthengi uletha ekhaya isitshalo esiza kuye ngqo kusuka kubamba lokushisa. Futhi lokhu kusho ukuthi akulungiselelwe indlela yokuphila yezitayela, ngakho-ke kungabhekana nokucindezelwa bese uqala ukwehla amaqabunga.
Ezimweni ezinjalo, ochwepheshe batusa kancane kancane ukuguqula umhlabathi nokondla isitshalo. Ngezinye izikhathi imbangela yalokho "ukucindezeleka" kwesitshalo kungase kube ukungabi namsoco nokukhanya.
Izifo zezitshalo zingabangelwa nje nge-waterlogging, kodwa ngokuphambene nalokho - ngokumelela kwomoya ekamelweni. Futhi lokhu, kuyindawo enhle kakhulu ekubukeni kwezinambuzane ezinjenge- spider mite noma thrips. Ngakho-ke, kufanele uchithe njalo indawo lapho izimbiza zikhona.
Ngenxa yobomvu bomoya, isifo esinjenge- powdery mildew singase siqale esitshalweni , lapho amaqabunga amhlophe avela emaqabini, izimbali noma amahlumela, athwala kalula kwezinye izimbali ngisho nangokwakheka kancane. Lokhu kungenye yezinhlobo zezifo ezingalawulwa ngokuhlukanisa isitshalo, ukususa izingxenye ezithintekayo nokuphala ngezikhathi ngezidakamizwa eziqukethe i-lecithin noma isulfure.
Olunye uhlobo lwesifo sesitshalo, okuvame ukuthinteka yizilwane zethu ezifuywayo eziluhlaza, umlenze omnyama, okuholela ekusebenzeni ngokucubungula noma ngokunyuka komhlabathi. Ngenxa yalokho, isiqu esisekelweni siqala ukwesaba nokufa, ngakho-ke lapho uhlwanyela ama-cuttings amasha, ungawafaki embizeni nge-polyethylene noma ingilazi.
Izifo zezitshalo ze-aquarium ezingabangelwa inhlabathi engakhethi kahle, ikhwalithi yamanzi empofu, ukungabi nanoma yimaphi ama-microelements, nokuntuleka kokukhanyisa akuvamile. Njengomthetho, isitshalo, sesifinyelele ezimweni ezihlukile kunezinto ezifanele, ihlushwa "ukucindezeleka", isikhathi esithile kubonakala sengathi iqhwa, bese iqala ukuhlaziya, futhi - uma izimo zendawo yokuhlala zihlala zifanayo - ziyafa.
Ngakho-ke, ku-aquarium kuyadingeka ukuba ubeke amanzi njalo, ususe izingxenye ezibolile zesitshalo, futhi uqaphele izimo zokugcinwa kwazo.
I-Gladiolus: isitoreji se-corms
Izimbali zasehlobo: ukukhetha okufanele
Amagilebhisi "amaKishmish aqhakazile": incazelo kanye nezici zokukhula
I-cotoneaster evamile njengengxenye ekuklanyeleni kwezwe
I-roses enhle yepaki: izinhlobo zesifunda saseMoscow (isithombe)
Amagilebhisi emadolobheni. Ukulima
Qeda nasekhothameni: sobuhle bayo yonke imininingwane
Izinkinga zomphakathi intsha njengoba kuveza izinkinga zezenhlalo
Indlela Nquma lokukhipha uphethe umsebenzi
Osmanthus: kuyini? Sweet-olunephunga elimnandi osmanthus - indlu tropical
Sokuqaqamba kwamalunga Posttraumatic: ukwelashwa
Kanjani ukwakha komuzi "The Sims 3" ngaphandle kwezinkinga?
Xhumana no-opharetha MTS - umhlahlandlela emfushane
I-Samara Academic Opera ne-Ballet Theatre: izithombe nokubuyekeza
Kanjani ukwazi ukuthi inamba yokubhaliswa kwesamba ku FSS futhi kungani sasidingeka?
Ikhukhamba ne currants abomvu ebusika
Indlela ukhule ube imbewu yesihlanu ekhaya?